Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Finland na -agbasa ozi ọma » Air France kwenyere na Santa Claus maka ihe na -erughị $ 400
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Finland na -agbasa ozi ọma • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air France na -emepe ụgbọ elu na obodo Santa Claus
Air France na-ekwupụta ụgbọ elu maka oge oyi 2021-2022 site na Paris, France gaa Rovaniemi, Finland.
Ụzọ Paris-Rovaniemi bụ nnukwu oghere maka njem na mgbake njem.
Ndị njem France abụrụla mba nke abụọ kachasị na Rovaniemi.
Mmeghe ụzọ na -eme ka Rovaniemi na Lapland na -ahụ maka njem mba ofesi na -aga n'ihu.
Air France ekwupụtala ụgbọ elu na -aga kpọmkwem site n'ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle dị na Paris Rovaniemi na mbido December.
Air France ekwuputala ụgbọ elu abụọ kwa izu malite na Disemba 4, 2021. Ụzọ oyi ga -enye ụgbọ elu ruo March 5, 2022.
“Obi dị anyị ụtọ maka ụzọ ọhụrụ Air France kwupụtara. Njikọ ọhụrụ a ga -emepụta njem ọzọ maka Lapland ma gosipụta nlọghachi nke njikọ ụgbọ elu maka Finland na Europe, "Petri Vuori na -ahụ maka mmepe na ire ahịa na Finavia kwuru.
Paris - Rovaniemi ụzọ bụ oghere dị mkpa maka njem na mgbake njem na iji hụ na ọganihu Rovaniemi na Lapland mba ụwa ga -eme n'ọdịnihu.
“N'ọkọ akụkọ, ndị njem France bụ mba nke abụọ kachasị na mba Rovaniemi. Ekwenyere na ụzọ ọhụụ ekwuputara ga -adịrị ndị njem na ndị na -eme njem nlegharị anya, ndị guzobelarị Rovaniemi ka ọ bụrụ ebe oyi na -ewu ewu na nke anwansi, "Sanna Kärkkäinen Onye isi nchịkwa nke nleta Rovaniemi kwuru.
Rovaniemi bụ isi obodo Lapland, na ugwu Finland. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbibi kpamkpam n'oge Agha IIwa nke Abụọ, taa ọ bụ obodo ọgbara ọhụrụ amaara na ọ bụ obodo Santa Claus “gọọmentị”, yana ilele ọkụ ọkụ nke ugwu. Ọ bụ Arktikum, ebe ngosi nka na sayensị nke na -enyocha mpaghara Arctic na akụkọ ihe mere eme nke Lapland Finnish. Science Center Pilke nwere ihe ngosi mmekọrịta na oke ọhịa.